News - Xaaladda horumarka iyo saadaasha isbeddelka qaybta suuqa ee warshadaha khadadka
Xaaladda horumarka iyo saadaasha isbeddelka qaybta suuqa ee warshadaha khadadka
1. Guudmarka iyo kala-saarista warshadaha khadadka
Ink waa walax dareere ah oo leh walxo midab leh oo si isku mid ah ugu firidhsan dhajiska isla markaana leh hawo gaar ah. Waa shey lagama maarmaan u ah daabacaadda. Baaqan maanta ee horumarinta dhaqaalaha kaarboon-hooseeya iyo kor u qaadista ilaalinta deegaanka ee cagaaran, soosaarka iyo adeegsiga keydinta tamarta iyo maqaar-beelka bey’ada u roon ayaa si isa soo taraysa u noqonaya isfahamka warshadaha khadadka iyo warshadaha daabacaadda.
Qalabka wax lagu xidho ayaa badanaa laga sameeyaa maaddooyin kala duwan iyo dareerayaal. Waxaa loo adeegsadaa sida side midab si loo hagaajiyo nafwaayaha, dheecaanka, qallaylka iyo waxqabadka wareejinta ee khad, iyo si ay khadku u qalasho, hagaajiyo oo u sameeyo filim dusha sare ee substrate ah. Midabku wuxuu go'aamiyaa midabka, xoogga xoqida, chromaticity, iska caabinta dareeraha, iska caabinta iftiinka, iyo iska caabinta kuleylka ee khadka. Wakiilka kaabayaasha waa qadar yar oo ka mid ah walxaha kaabayaasha ah ee lagu daro si loo hagaajiyo waxqabadka khadadka isla markaana loo habeeyo la qabsashada daabacaadda ee khadka inta lagu jiro soosaarka kaydinta iyo daabacaadda. Waxaa jira noocyo badan oo ah daakadaha, noocyada kala duwan ee feeraha ayaa si weyn ugu kala duwan halabuurka iyo waxqabadka. Marka loo eego qaabab daabacan oo kala duwan, noocyada dareeraha iyo hababka qalajinta, waxaa loo qaybin karaa qaybaha soo socda:
Lagu kala soocay qaabka daabacaadda: khad xardhan, khadadka jilicsan, khad daabacaadda shaashadda iyo khad daabacaadda diyaaradda ah, iwm;
Waxaa loo kala qaadey nooca dareeraha: khad dareeraha ku saleysan benzophenone, khad saliid ku saleysan, khamriga / kalkaaliyaha aaladda dareeraha, aaladda biyaha ku saleysan iyo khad aan lahayn milix;
Lagu qeexay habka qalajinta: khad qalajinta qalalan, qallajinta qallajinta isku-xirka qallalan, kuleylka qalajinta kuleylka, daaweynta ultraviolet (UV) iyo qalajinta kale ee qalajinta.
Warshadaha khadku waxay dhasheen kacaankii ugu horeeyey ee warshadaha ee wadamada reer galbeedka waxayna si xawli leh u horumareen sababo la xiriira horumarinta warshadaha daabacaadda kiimikada iyo baakadaha. Laga soo bilaabo 1980-yadii, iyadoo la horumarinayo dhaqaalaha adduunka iyo horumarka sayniska iyo teknolojiyadda, wax soo saarka warshadaha soosaarka khadadka caalamiga ah ayaa sii waday inuu kor u kaco, xoogsaaridda warshaduhuna si weyn ayey kor ugu kacday. Tobanka shirkadood ee ugu sarreeya adduunka ayaa leh in kabadan 70% saamiyada suuqyada adduunka. Mareykanka, Shiinaha, Japan iyo Jarmalka ayaa noqday kuwa ugu badan ee soo saara khadadka adduunka iyo macaamiishooda. Sanadihii ugu dambeeyay, soosaarka sanadlaha ah ee caalamiga ah ee khadku wuxuu kudhowaad yahay 4.2 ilaa 4.5 milyan tan, kuwaa oo soo saarista khadadka dalkaygu qiyaastii yahay 17% wadarta soosaarka guud ee khadadka adduunka. dalkaygu wuxuu noqday wadanka labaad ee dunida ugu soo saara khadadka ugu badan.
2. Qaybinta suuqa iyo falanqaynta isbeddelka warshadaha khadadka
Wax soo saarka sanadlaha ah ee khadadka dalkayga wuxuu ka kordhay 697,000 tan sanadkii 2015 ilaa 794,000 tan sanadka 2019, celcelis ahaan kobaca sanadlaha ee qiyaastii 3.3%. Tobankii sano ee la soo dhaafay, tayada iyo tirada wax soo saarka khadadka dalkayga waxaa soo maray isbadalo aad u baaxad weyn, laakiin isticmaalka qofkasta ee wadankeyga ah ee walxaha daabacan wali wey hooseysaa. Horumarka joogtada ah ee dhaqaalaha qaranka wadankeyga, horumarka xoogan ee khadku sidoo kale waa iska cadahay. Mustaqbalka, horumarinta warshadaha khadadka dalkaygu ma kordhin doono oo keliya wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay fiiro gaar ah siinayaan hagaajinta qaabdhismeedka wax soo saarka, inta badan si loo kordhiyo uruurinta wax soo saarka, kordhinta cilmi baarista iyo horumarka, loo hagaajiyo waxyaabaha sayniska iyo farsamada, tayada wax soo saarka iyo xasiloonida wax soo saarka, kana dhigo mid sifiican ula jaanqaaday warshadaha daabacaadda casriga ah Maanta waxay u baahan yihiin midabbo badan, xawaare sare, qalayl dhakhso leh, wasakh la'aan iyo isticmaalka hooseeya.
Marka laga eego aragtida qaab dhismeedka wax soo saarka, sida ku cad tirakoobyada la xiriira sida Ururka Shiinaha ee Ink iyo Guddiga Xirfadleyda ee Daaweynta Shucaaca ee Bulshada Sawirka Shiinaha, soo saarista waraaqaha daabacaadda ee dalkeyga ee 2018 ayaa lagu qiyaasey qiyaastii 36.0% wadarta guud ee khadadka gudaha wax soo saar Wadarta waxsoosaarka maaddada jilicsanaanta iyo jajabka (gasacadaha dareeraha ah ayaa inta badan ah Meelaha arjiga ee shirkadda waxaa lagu tiriyay qiyaastii 42.8% ee wadarta wax soo saarka khadadka gudaha, iyo faashadda UV waxaa lagu tiriyay qiyaastii 9.2% ee wadarta wax soo saarka khadadka gudaha.
(1) Falanqaynta suuqa khad UV
Waqtigan xaadirka ah, goobta dalabka ugu weyn ee khadadka UV-ga ee gudaha waa daabacaadda sigaar heer sare ah, khamri, alaabada daryeelka caafimaadka iyo baakadaha isku qurxinta, taas oo ka dhigan in ka badan kala badh; tan xigta waa daabacaadda calaamado kala duwan, biilal, iwm; inta soo hartay waa qalab gaar ah ama ujeedooyin gaar ah Badeecado, sida kaararka magnetic, go'yaal balaastig ah iyo alaabooyin kale, iyo isbeddelka xaashiyaha caagga ah ee isticmaalaya tiknoolajiyada daabacaadda UV ayaa si joogto ah u soo koraya.
Sanadihii la soo dhaafay, tiknoolajiyada daaweynta UV UV ayaa si tartiib tartiib ah u soo baxday, waxaana la filayaa inay noqon doonto tiknoolajiyada daaweynta guud ee mustaqbalka. Khadka waxaa lagu daaweeyaa iftiinka LED, kala duwanaanshaha dhererkiisu waa mid aad u cidhiidhi ah (oo hadda ah 365 ~ 395nm hal dheere), iftiinka LED wuxuu leeyahay nolol adeeg dheeri ah, waxtarka sare ee tamarta, isticmaalka tamarta hoose, iyo iftiinka LED-ka waa la shidi karaa isla markaana la dami karaa isla markiiba iyada oo aan la kululeynin , Shucaaca kuleylku waa mid aad u hooseeya, ozone lama soo saaro, waana ka amaan badan yahay, bey'ada u roon oo ka badbaadin kara tamar badan laambada meerkuriga ee cadaadiska sare leh ee loo isticmaalo daaweynta UV khad dhaqameedka. Sida laga soo xigtay hay'adda cilmi baarista suuqa ee Yole, saamiga caalamiga ah ee loo yaqaan 'UV UV market' ee UV ee lagu daaweynayo ilaha iftiinka ayaa ka kici doona 21% sanadka 2015 ilaa 52% sanadka 2021, iyo maqaarka UV-LED ayaa leh rajo horumarineed oo wanaagsan mustaqbalka.
Marka laga fiiriyo qaab dhismeedka wax soo saarka, oo ku saleysan waxqabadka wanaagsan ee keydinta iyo ilaalinta deegaanka ee looxyada UV, soo saarista qashinka UV-ga ee dalkayga (oo ay ku jiraan daabacaadda maaddada UV iyo maaddada loo yaqaan 'UV alks,' iwm) ayaa lagu tiriyay kororka guud ee saamiga wadarta wax soo saarka khadadka gudaha. 5.24% ayaa ku kordhay 9.17% sanadka 2018, koritaan deg deg ah, waxaana lafilayaa in wali ay jiri doonaan meelo badan oo koriinka ah mustaqbalka.